Iningi Lesinqumo Sokuthenga ku-B2B Senzeka Ngaphambi Kokuxhumana Nenkampani Yakho | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 7, 2014 NgeSonto, Okthoba 5, 2014 Douglas Karr
Ngesikhathi elinye ibhizinisi lixhumana nebhizinisi lakho ukuthenga umkhiqizo noma insizakalo yakho, kunjalo izingxenye ezimbili kwezintathu kuya kumaphesenti angama-90 ohambo lwabo lokuthenga. Abangaphezu kwesigamu sabo bonke abathengi be-B2B baqala inqubo yokukhetha umthengisi wabo olandelayo ngokwenza ucwaningo olungakahleleki mayelana nezinselelo zebhizinisi ezihambisana nenkinga abayicwaningayo.
Lokhu yiqiniso kwezwe esiphila kulo! Abathengi be-B2B abanaso isineke noma isikhathi sokulinda abamele abathengisi bakho abaphumayo ukuthi bazokwethulela umkhiqizo noma insizakalo yabo. Bayayazi vele inkinga futhi sebevele bacwaninga ngesixazululo. Ithimba lakho kufanele likhiqize okuqukethwe okusekayo kanye negunya lokwakha kuma-social media nemiphumela yosesho ukuze ukwazi ukuyibamba ekuqaleni kwezigaba zocwaningo. Ou
Ukuthengiswa kwe-B2B kungaba nzima, futhi uma ufana nezinkampani eziningi laphaya, ujikisa amasondo akho uzama ukuthola ukuthengisa ngamasu wendabuko aphumayo njengokushaya okubandayo, ama-tradeshows kanye ne-imeyili eqondile. Lokhu infographic, Ukuthengiswa kwe-B2B Kushintshile, Sizokukhombisa ukuthi kungani abathengisi abakhaliphile besusa ngokushesha amasu abo okuphuma kanye nokuthengisa ngezindlela ezingenayo. Udinga ukukhiqiza ukuhola okuningi futhi ekugcineni uthole imali ethe xaxa, futhi le infographic izokukhomba kumathuluzi angakubuyisela emuva. Kusuka Khulisa iMidiya Yezokuxhumana.
Abanye abantu bangathanda ukufaka okungena ngaphakathi esikhundleni sokumaketha okuphumayo. Angikholwa ukuthi lokho ukuqhathanisa okuvumelekile. Eqinisweni, ngikholwa ukuthi inhlanganisela yomzamo ongenayo nophumayo wandisa amathuba akho okuvala kahle. Okuqukethwe kunomsila wokuphila omuhle futhi - i-infographic noma i-whitepaper ingashayela imikhondo iminyaka, inikeze amandla iqembu lakho lokuthengisa eliphumayo ukugxila ekwakheni ubudlelwano nasekuvalweni kokuthengiswa kunokuba umane ukwazisa ngethemba.
Tags: b2b abathengi uhamboukumaketha kwe-b2bb2b isinqumo sokuthengaucwaningo lwe-b2bukuthengiswa kwe-b2babathengi uhamboisinqumo sokuthenga